ဗောဓိ နည်းနာဆိုင်ရာ အကျဉ်းချုပ် မိတ်ဆက်
မဟာဉာဏ်အလင်း (ဂျီအိုင်) တရားအားထုတ်မှုသည် ၁၈နှစ်ကာလပတ်လုံး ဉာဏ်အလင်းဆောင် ပြုစု ပျိုးထောင်ခဲ့ရာမှတဆင့် ဗောဓိတရားစခန်း တည်ထောင်ခဲ့သူ ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ ချမှတ်ပြုစုခဲ့သော ရတနာ တစ်ပါးဖြစ်ပါသည်။ ယနေ့ခေတ်ကာလ၏ အလုပ်များသူများအတွက် သင့်လျော်စေလျက် လေ့လာရန် လွယ်ကူပြီး အကျိုးသက်ရောက်မှုများမှာ သိသာထင်ရှားလှပါသည်။ .
မဟာဉာဏ်အလင်း တရားအားထုတ်မှု ပွားများကျင့်သုံးခြင်းသည် အကြင်သူ၏ ခုခံစွမ်းရည်ကို တိုးတက်အား ကောင်းစေလျက် စွမ်းအင်လျင်မြန်စွာပြန်လည်ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး တက်ကြွလန်းဆန်းမှု ရရှိစေသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည့်အတွက် ကျန်းမာရေး ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်။ ထို့အတူ တရားအားထုတ်ခြင်း သည် စိတ်နှင့် ခန္ဓာကို သန့်ရှင်းစင်ကြယ်စေသည့်အပြင် စိတ်ဆင်းရဲမှု အာရုံအားလုံးကို အေးငြိမ်းစေပြီး စိတ်ကို တည်ငြိမ်အေးချမ်းစေပါသည်။ ၎င်းသည် ကျင့်ကြံအားထုတ်သူကို ဆင်ခြင်တွေးတောမှုများ သွတ်သွင်း ပျိုးထောင်ပေးပြီး နိယာမ သဘောသဘာဝကို နားလည်သဘောပေါက်စေရန် လမ်းညွှန်လျက် စိတ်ဝိညာဉ်ကို လှုံ့ဆော်ပေးပါသည်။ ခန္ဓာအတွင်းမှ အဖြစ်အပျက်သဘောတရားများနှင့် ဉာဏ်အလင်း ရှာဖွေနိုင်စေပြီး စိတ်ကို ကြည်လင်လန်းဆန်းစေပါသည်။.
ဘေသဇ္ဇဂုရုဗုဒ္ဓ၏ မဟာဉာဏ်အလင်း တရားပွားများအားထုတ်ခြင်း
ဘေသဇ္ဇဂုရုဗုဒ္ဓ၏ မဟာဉာဏ်အလင်း တရားအားထုတ်ခြင်းသည် ဉာဏ်ပါရမီရှင် တရားပြဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ ကိုယ်တိုင် ပြုစုပျိုးထောင်ချက်၏ အနှစ်သာရဖြစ်ပါသည်။ ဤကျင့်ကြံနည်းလမ်းသည် ဘေသဇ္ဇ ဂုရုဗုဒ္ဓ၏ မဟာကရုဏာတော် ထက်သန်မှုနှင့် စွမ်းအားတို့ဖြင့် တစ်သားတည်းဖြစ်စေသည့် အထူး နည်းနိဿယ တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျင့်ကြံပွားများကြသူများသည် ကျန်းမာရေးနှင့် ကံအခြေအနေ တိုးတက်ကောင်းမွန်မှု ခံစား ကြရမည်ဖြစ်ပြီး ဉာဏ်ဖြင့် သိရှိရှုမှတ်နေသည့် ခန္ဓာနှင့် စိတ်တို့မှတဆင့် အသက်ရှည်စွာနေထိုင်ကြရမည့် အပြင် ၎င်းတို့၏သံသရာခရီးကို အကောင်းဆုံးဖန်တီးနိုင်ကာ အခြားသူများကိုလည်း ကူညီနိုင်ပြီး ဉာဏ် အလင်း ရရှိကြမည်ဖြစ်သည်။ .
မှောက်လျက်ဝပ်စင်းခြင်းသည် ညင်သာသော အရိုးဗစ်လေ့ကျင့်ခန်းတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ၄င်းသည် အပြင်ရုပ်ပိုင်းတွင် ကြွက်သားများကို လေ့ကျင့်ပေးပါသည်၊ အတွင်းပိုင်းအားဖြင့် ကိုယ်တွင်းအင်္ဂါများနှင့် ဆေးဝါးစွမ်းအင်စုပ်ယူစီးဆင်းလမ်းကြောင်းများ၏ လုပ်ဆောင်ချက်များကို ပိုမိုကောင်းမွန်စေပါသည်၊ သွေးလည်ပတ်မှု အားကောင်းစေပါသည်၊ ခုခံရည် တိုးတက်စေပါသည်၊ နှလုံးနှင့် သွေးကြောမျှင် လုပ်ဆောင် ချက်များနှင့် ဓာတ်မတည့်မှုများမှ ခုခံအား ကလာပ်စည်းများကို တိုးမြှင့်ပေးပါသည်။ မှောက်လျက်ဝပ်စင်း ခြင်းသည် အဝလွန်ကဲမှုကာကွယ်ရန်နှင့် အလေးချိန် လျော့ကျစေရန် လူအများလုပ်ဆောင်နေသည့် လေ့ကျင့်ခန်းတစ်ခုကဲ့သို့ ဘဝကျန်းမာရေးအတွက် ဝှက်ဖဲတစ်ချပ် ဖြစ်ပါသည်။
ကြည်ညိုနှစ်လိုသည့် စိတ်နှလုံးဖြင့် ဝမ်းလျားမှောက်ရှိခိုးခြင်းသည် ဗုဒ္ဓဘုရားများနှင့် ဗောဓိသတ္တယနခေါ် ဘုရားလောင်းတို့၏ မဟာကရုဏာတော် ထက်သန်မှုနှင့် စွမ်းအားတို့ဖြင့် ဆက်သွယ်မှုရရှိစေသည့်အတွက် အနှောင့်အယှက်များဖြေရှင်းပေးခြင်း၊ ဉာဏ်ပညာတိုးတက်ခြင်း၊ စိတ်နှင့် ခန္ဓာသန့်စင်ခြင်းနှင့် သန့်ရှင်းတည်ငြိမ်သည့် ကရုဏာစိတ်ကို ရရှိစေပါသည်။.
စွမ်းအင်ဘဂွါ သည် ဉာဏ်ပါရမီရှင် တရားပြဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ၏ ပြုစုပျိုးထောင်ထားသည့် နှစ်ကာလများမှ နောက်ဆုံးရလဒ်တစ်ခုအဖြစ် ဖော်ထုတ်ထားသည့် အထူးကျင့်ကြံသည့် နည်းလမ်းတစ်ရပ် ဖြစ်သည်။ ဤနည်း လမ်းသည် စင်္ကြာဝဠာ စွမ်းအင်နှင့် အပြန်အလှန် တုံ့လှယ်မှုရှိစေပြီး လန်းဆန်းတက်ကြွမှု နှင့် ကျန်းမာရေး ကောင်းမွန်စေလျက် အလင်းနှင့် အမှောင်စွမ်းအင်ကို မျှတစေသည့် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန် စေရန် ထိန်းသိမ်း ပေးသော နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ .
စွမ်းအင်ဘဂွါ သည် အထူးသဖြင့် အအေးဒါဏ် မခံနိုင်သည့် ခန္ဓာကိုယ်ရှိသူများအတွက် — စုစုပေါင်း လက္ခဏာသွင်ပြင်ကို တိုးတက်စေရေး ချည်းကပ်နည်းသစ်ဖြစ်ပါသည်။ မှတ်ဉာဏ်၊ ကိုယ်လက်အင်္ဂါ ကွေးဆန့်မှုနှင့် နောက်ထပ် များစွာတို့ကို တိုးတက်စေသည်ဟုလည်း သိရှိရပါသည်။.
အနန္တသစ္စာ တရားကျင့်ကြံပွားများခြင်း : ဘသဇ္ဇဂုရုဗုဒ္ဓ၏ စိတ်နှလုံးတော် ဂါထာ မန္တာ
တာယာတာ ဥုံ ဘက္ကန္ဇီ ဘက္ကန္ဇီ မဟာ ဘက္ကန္ဇီ ရာဓဇ သမ္မုဂါတီ ဆို
တရားပြဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ သင်ပြထားသည့်အတိုင်း အသံထွက်၍ နှလုံးသွင်း ရွတ်ဆိုခြင်းသည် အတိုင်း မသိသော အကျိုးရလဒ်များ ရရှိစေပါသည်။ ဤနည်းလမ်းဖြင့် ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် ဘေသဇ္ဇ ဂုရုဗုဒ္ဓနှင့် ချိတ်ဆက်မှုရရန်နှင့် ကိုယ်စိတ်နှလုံးသန့်စင်စေရန် အမြန်နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည့်အတွက် မင်္ဂလာရှိမှု၊ ရောင့်ရဲတင်းတိမ်မှုနှင့် လွတ်လပ်မှုတို့ကို ဖော်ဆောင်နိုင်ပါသည်။.
ကြည်လင်သန့်ရှင်းမှု ပွားများအားထုတ်ခြင်းသည် မဟာဉာဏ်အလင်း တရား အားထုတ်နိုင်ရေးအတွက် ဒွန်တွဲ အားထုတ် မှုဖြစ်ပြီး ကျင့်ကြံအားထုတ်သူများကို ပွားများအားထုတ်မှု၏ သုခချမ်းသာတွင် လျင်မြန်စွာ စီးမျောခွင့်ပြုပေးပါ သည်။ ဆရာတော် ဂျင်ဗောဓိ၏ လမ်းညွှန်စောင်မမှုဖြင့် ပြည့်လျှံရှုပ်ထွေးနေသည့် အတွေးများကို လျင်မြန်စွာ ကင်းရှင်းစေသော ကြည်လင်သန့်စင်သည့် အခြေအနေသို့ သဘာဝအလျောက် ရောက်ရှိနိုင်ပါသည်။ ဒုက္ခ ဝေဒနာ ခံစားနေရသူများသည် အာရုံတည်ငြိမ်မှု ရရှိနိုင်ပြီး နိဗ္ဗာန်နှင့် ပထဝီကမ္ဘာမြေကြီး တို့နှင့် အတူရှိသူတစ်ဦးဖြစ်နိုင်ပါသည်။ ထိုနည်းတူ ဤနည်းလမ်းသည် ဒုက္ခဆင်းရဲမှုများကို သက်သာပျောက်ကင်းစေနိုင်ပြီး ရောဂါ အန္တရာယ်များမှ ကင်းဝေးစေကာ ကိုယ်ခန္ဓာကို စွမ်းအားတိုးတက်စေသည့်အပြင် ဒါသစိတ်များကို ချိုးနှိမ် စေနိုင်ပါသည်။ ဤအရာသည် ဉာဏ်အလင်း ရှုမှတ်မှုအခြေအနေတွင် အာရုံစူးစိုက်မှုနှင့် မွေ့လျော်မှုအား ကောင်းစေရန် နည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ စိတ်စွမ်းအင်များ ပွင့်ထွက်လာစေရန်နှင့် အနန္တ ဉာဏ်ပညာ ထွန်းလင်းစေရေးအတွက် လမ်းတစ်သွယ်ဖြစ်ပါသည်။ .
Pre：ဗောဓိ တရားအားထုတ်ပွားများမှု မိတ်ဆက်ဖော်ပြချက်